Hababka diro Messages / Photos / Videos on macruufka
In this article waxaad ka heli kartaa habab sare u leh adeegsiga Fb Rasuulka saabsan fariimaha, gudbinta iyo sidoo kale u gudbinta ogeysiisyada, gudbinta sawirada iyo sidoo kale filimada. Fb Rasuulka shaqeeyaa aad u fiican in unugyada macruufka inay xiriir la sameeyaan dadka si dhakhso ah. Qofka doorashada si ay u awoodaan u soo diro lagu dhawaaqayo lacag la'aan ah iyo sidoo kale hayn xiriir aad u wanaagsan adiga oo isticmaaleya isticmaale saaxiibada, xaaska iyo carruurta, dadka kula shaqeeya, wada run ahaantii qof in aad kaliya dooni. Xitaa haddii ay u aqoonsadaan oo xidhiidh la leh warbaahinta bulshada bulshada gaar ah, Fb Rasuulka la fulin karo, waayo, wax kasta oo hadal ka Guide Phone aad, ma aha oo keliya ku saabsan saaxiibada Fb. Hawlaha Popular u tari si fudud ay dadka waawayn ay yihiin gudbiyo sawirada, filimada, sameeyo taleefan gacanta, txt fariimaha. Waxaad u baahan tahay in ay soo saaraan koox oo sidoo kale la hadlaan oo dhan oo iyaga ka mid, waxaa suurto gal ah in ay soo saaraan oo dhan oo iyaga ka mid super fudud. Inta lagu guda jiro wada hadal ay la socdaan qof kasta, waa in aad isticmaasho tabeelooyin, inay qiimeeyaan aad sawirada camera dhaqaaqo video hadda jira iyo sidoo kale filimada aan ka tago hadalka gaar ahaan ka dambeeya iyo dooran kuwa aad u baahan tahay si ay u soo diro. Waxa kale oo suurto gal ah in midab taariikhda ogaysiiska codka iyo sidoo kale telefoonada, kuwaas oo u soo diro PALs aad. Waxaa jira in badan oo fursadaha iyo sidoo kale falalka aad samayn karto, oo ay ku jiraan ogeysiisyada soo gudbiyo iyo sidoo kale sawiro si ay u awoodaan inay shakhsiyaadka aan ka hadal, bilowdo xaafaddaada si ay u awoodaan si ay u suuragal ah in dadka si dhab ah u bartaan xaggee baad waxaad u malaynaysaa ' dib. Waxa intaa dheer in badan, waxaad yeelan doontaa war sida ugu dhakhsaha badan qof ayaa ogaaday lagu dhawaaqayo aad hadda oo aad xidhi doontaa badan signal sida ugu dhakhsaha badan aadan rabin in la soo dhibtay.
2. Sida loo soo diro fariimo la Facebook Rasuulka ee macruufka ah xaaladahan soo socda:
Si kastaba ha ahaatee waxaad u baahan tahay in la dhiso Rasuulka Facebook iyo dooro info ee aad rabto in ay bixiso, sida profile, saaxiibada dadweynaha.
1) Sida loo soo diro fariimo la Fb Rasuulka ee macruufka
1. Laga soo bilaabo menu ka dooro oo guji "Farriin New":
Inta lagu guda jiro qortid magac, waxaad arki doontaa oo dhan aad xiriirka la leedahay adigoo magacooda eraygan. Waxaad chhose kartaa saaxiib kaliya adigoo gujinaya magaca.
2. Qor fariinta oo u soo dir
Ka dib markii aad doorato xiriir ah, waxa ay noqon doontaa furan yahay suuqa kala cusub meesha aad ku qor kartaa farriin. Marka ay ku dhameysatay kaalinta aad ku qorto, guji Send. Waxaad arki doontaa haddii qofkaas waa online iyo haddii uu akhriyo farriin.
2) Sida loo soo diro Facebook Rasuulka fariimaha dhammaan saaxiibada facebook ee macruufka (bandhigo tallaabo-tallaabo hage la Screenshot)
1. Tag Messages
Tag menu iyo guji "Messages" tab si ay u soo diri farriinta aad saaxiibadaa facebook. Waxaad ka fiirsan karaan inay tallaabo hore 1 ka mid fariin u diraya saaxiib.
2. Search Facebook Friends
Waxaad u baahan tahay si ay u bilaabaan qortid magacyada saaxiibadaa iyo saaxiibada dooro ka aad facebook saaxiibo liiska. Ka dib marka aad soo xulay saaxiibada ka soo liiska facebook aad, guji Send.
3) Sida loo gudbin Facebook Rasuulka fariimaha ku macruufka (bandhigo tallaabo-tallaabo hage la Screenshot)
Waxaad farriin u saaxiib ah u gudbin karaa haddii isaga ama iyada ayaa ku biiray in wadahadalka. Sidoo kale, waxaad soo gudbin kartaa sawir oo kaliya, ama farriin qoraal ah oo dhan.
1. Dooro fariinta
Aad mailkooda dooro farriinta ah in aad rabtid in aad u gudbinayaan.
2. gudbiyo fariinta
Riix Menu, markaas Reply dooro Forward.
4) Sida loo soo diro sawiro iyo videos la Facebook Rasuulka ee macruufka (bandhigo tallaabo-tallaabo hage la Screenshot)
Facebook Rasuulka waxaad u bixisaa suurtogal ah inuu ku soo diri photos xitaa, videos, files audio, iyo fariimaha qoraalka ah dabcan. Wixii sawiro aad si toos ah u diri kartaa sawir qaaday oo aad macruufka camera qalab.
Iyadoo Facebook Rasuulka ee macruufka idinku waxaad u soontaan wadaagi kartaa video iyo sawir. Inta lagu guda jiro wada hadal oo aan u tago, waxa aad awoodi kartaa in aad aragto oo dhan sawiro aad ka camera.
1. Fariinta mid saaxiib
Raadi saaxiibkaa oo la furo dariishadaha Quraanka. Waxaad qori kartaa qoraal iyo xitaa aad ee wada hadalka in, waxaad ku diri kartaa mid ka mid ah sawir. Ka hor inta u soo dirto image ka, waxaad ka arki kartaa sawirada ka camera kitaabkii duudduubnaa iyo doorasho kaliya sawir la yaab leh in aad rabto in aad la wadaagto. Sidaas darteed, uma baahnid in uu ka tago chat ah.
2. Photo qaybsiga
Kolkiiba aad la wadaagi karto sawirka marka aad hore u wada hadalka. Dooro sawir in guji si ay u soo dir.
Facebook waxaa Rasuulka saaran wax ku ool ah u iPhone tufaax 5+, itouch ipod, kiniin ipad tufaax iyo sidoo kale xiiso u yar ee nidaamka dhabta weyn ee sida caadiga ah waa macruufka 7. 0 +. Iyadoo brand kasta oo cusub oo la keeno si ay taariikhda, codsi isku day dhabta ah si ay u qanciso dadka u baahan. Inside nuquladii hore, dadka ku lug leh iPhone tufaax la kulmay arrimo badan oo u qoran. Arrimaha ugu badan ee ay ahayd waqti kasta 1 tufaax iPhone 5 dalabyo shaqsi la casriyeeyay la iPhone tufaax ah 6. In haystaa sacab muggiis oo kaliya ee erayo iyo odhaaho, waxaan odhan karaan, taas oo codsi Facebook Rasuulka kuu ogolaanaysaa inaad soo dir, ogeysiisyada, frontward email ah la saaxiib wanaagsan , soo dir, sawiro lagu daro online video kaliya hal tuubada. Intaas waxaa sii dheer, waxa aad awoodi kartaa in ay curiyaan kooxaha la fikirka shakhsi shakhsi iyo hay'adaha aad hadda dheeriga ah ee sawirka. Si fudud ku siin horyaalka ah brand koox cusub marka laga soo tago in la kordhiyo sawir fiican ee doorasho. Waxaa suurto gal ah in aad la hadashid la socdaan qortaa oo ku saabsan wada waxyaabaha warbaahinta aad saaxiibada si deg deg ah. Ku dhowaad dhammaan fariimaha waxaa sida caadiga ah loo diray lacag la'aan ah, iyo muujinta brand-cusub ugu weyn wuxuu noqon doonaa in aad sida macquulka ah ka caawin kara ka dhigi u baahan tahay lacag la'aan ah. Qofka si fudud u baahan tahay shabakad Wireless iyo wac aad dhamaystiran saaxiibada fiidkii tahay marka wadan kale. Helitaanka oo dhan ka hor kulanka ay la socdaan habaysan, farriimo kuwa inta badan waa post fudud ku saabsan haya-, casharo video, naqshadeynta. Search tab kuu ogolaanaya in aad ogaado saaxiibada aad oo lagu daray kooxaha aad iyo aad la wadaagi karto iyaga sawiro iyo videos degdeg ah.
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay HTC Phones
Arrimaha ku saabsan Spotify macruufka Raadi Your Solutions Halkan
10 sababood oo ma ahan inaad ku rakibto macruufka 9 beta
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga qalabka macruufka in ZTE Phones
Top 4 Siyaabaha Roll Camera faaruqa ah ka macruufka 7 Devices
> Resource > macruufka > Sida loo diri Facebook Rasuulka Messages / Photos / Videos on macruufka